I-EnFont eyoyikisayo yinkqubo entsha yewebhu onokutshintsha kuyo iifonti | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-EnFont eyoyikisayo yinkqubo yewebhu eyenziwe ngumyili waseSpain ekuvumela ukuba wenze iifonti zekinetic ezintle kwaye ezimangalisayo. Sitsho ukuba kwimizuzwana embalwa unokugoba inxenye yayo nayiphi na ifonti ukwenza eyakho ngeziphumo ezimangalisayo.
Ke le nto yenziwe yile webhusayithi yenziwe nguJavier Arce ukuthatha umthombo, ukunyoba kunokuba yinto eyoyikekayo kwaye ukujike ibe yinto eyahlukileyo ngokupheleleyo kolunye uhlobo lomsebenzi esiwudingayo. Ngokucacileyo, inobuhle bayo obukhethekileyo kwaye inokusetyenziselwa izinto ezithile.
I-EnFont eyoyikekayo ngumsebenzi owenziwe ngumyili waseSpain uJavier Arce kwaye ovela kumagama akhe, akazi kakhulu malunga nokuba yintoni ikerning, kodwa uyayenza uthathe isigqibo sokwenza eyakho indawo typographic iwebhusayithi yokuvelisa ifonti.
Kwaye inyaniso ukuba umphumo unomdla, kuba sijamelene newebhusayithi esebenzisa isikhangeli sethu ukuvelisa iifonti zohlobo lwe-OpenType zezona zinto zimangalisayo wakha wazibona. Olunye lwamagqabantshintshi alo kukusebenziseka lula, kuba ungasebenzisa iifonti emiselweyo ukuziguqula ziye kwezinye ezingaqhelekanga kwimicimbi yemizuzwana.
Siza kwenza yonke into ngokusebenzisa izilayidi ezimbalwa ezithatha ezinye iiparameter ezifumana iziphumo ezinomdla. Ukuba sinomonde nexesha elaneleyo, sinokwenza iifonti ezinomtsalane. Uya kuba nayo, ngalo mzuzu, leyo Nqakraza kwiqhosha «Yakha Ifonti» ke sinako ukugcina oloyiko lungaqhelekanga kwifomathi ye-OpenType.
Uvavanyo njenge-app yewebhu, nantsi ikhonkco EnFont eyoyikisayo, que iyakuguqula loo mithombo yaziwayo ibe luhlobo lotshintsho kuyamangalisa ukuba kunokwenzeka ukuba eminye imisebenzi inokusinceda. Ke kuya kuba lula ukwahlula abanye. Sikushiya ne enye insiza yewebhu kaGoogle ebizwa ngokuba yiSquoosh onokuyicinezela ngayo imifanekiso ukuze ibenobunzima obuncinci xa uzilayisha kwiiwebhusayithi zakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Yenza iifonti zekinetic ezintle kwaye ziyamangalisa nge-app ye-EnFont eyoyikisayo yewebhu